(trg)="1"> 3 Cula Uvakale !
(trg)="2"> Kudala kwabaluleka ukucula kubakhonzi bakaYehova .
(trg)="3"> Kodwa ke , abanye abathandi ukucula phambi kwabantu .
(trg)="4"> Sinokwenza ntoni ukuze siyeke ukoyika ukuculela uYehova ?
(trg)="5"> Eli nqaku lisixelela ngezizathu zokuba kufuneka sicule sivakale kwaye linamacebiso endlela esinokucula bhetele ngayo .
(trg)="6"> 8 Ngaba Ubalekela KuYehova ?
(trg)="7"> 13 Gweba Kakuhle Kwaye Ube Nenceba NjengoYehova
(trg)="8"> Sinokufunda lukhulu kwizixeko zokusabela ezazikho ngexesha lamaSirayeli .
(trg)="9"> Kwinqaku lokuqala , uzujonge indlela aboni abanokubalekela ngayo kuYehova kule mihla .
(trg)="10"> Kwelesibini , jonga indlela umzekelo kaYehova osinceda ngayo ukuba sibaxolele abantu , sihlonele ubomi size sigwebe ngobulungisa .
(trg)="11"> 18 ‘ Onobubele Uya Kusikelelwa ’
(trg)="12"> 20 Musa Ukucinga Ngendlela Yehlabathi
(trg)="13"> 25 Ungavumeli Nantoni Na Ikwenze Ungawufumani Umvuzo
(trg)="14"> La manqaku mabini athetha ngamacebiso aphefumlelweyo kaPawulos awawanika amaKristu aseKolose .
(trg)="15"> Inqaku lokuqala libonisa ukuba singenza ntoni xa abantu bethetha izinto ezivakala zinengqondo kodwa zibe ziyindlela yokucinga yehlabathi .
(trg)="16"> Elesibini liza kusikhumbuza ngezinto ekufuneka sizenze okanye singazenzi ukuze singaphoswa ziintsikelelo uYehova asithembise zona .
(trg)="17"> 30 Unokwenza Ntoni Ukuze Uqhele Kwibandla Osandul ’ Ukufika Kulo ?
(trg)="3"> IINGOMA : 9 , 138
(trg)="4"> Kubaluleke kangakanani ukucula ekukhonzeni uThixo ?
(trg)="5"> Unokwenza ntoni ukuze uyeke ukoyika ukucula uze uculele uYehova ngentliziyo yakho yonke ?
(trg)="6"> Ziintoni eziye zatshintshwa kwiculo elitsha , ibe unokwenza ntoni ukuze zikuncede ?
(trg)="7"> Ukucula kusinceda senze ntoni ?
(trg)="8"> OMNYE umbhali odumileyo wathi : “ Amazwi akwenza ucinge .
(trg)="9"> Izixhobo zomculo zikwenza uvakalelwe .
(trg)="10"> Kodwa ingoma ikwenza uzenze zombini . ”
(trg)="11"> Ngeengoma zethu sidumisa kwaye sibonisa ukuba siyamthanda uBawo wethu osezulwini , uYehova .
(trg)="12"> Zisenza sizive sisondele kuye .
(trg)="13"> Akusothusi ke ngoko ukuba ukucula kubaluleke kangaka kunqulo lwenene , enoba umntu uyaziculela okanye ucula nebandla .
(trg)="14"> 2 , 3 . ( a ) Abanye abantu baziva njani ngokucula bavakale ebandleni ?
(trg)="15"> ( b ) Yeyiphi imibuzo esiza kuyiphendula ?
(trg)="16"> Kodwa uziva njani xa kufuneka ucule uvakale ebandleni ?
(trg)="17"> Ngaba uba neentloni ?
(trg)="19"> Le nto isenokulichana ibandla , ingakumbi xa abadala beculela phantsi okanye besenza ezinye izinto ngoxa kuculwa . — INdu .
(trg)="21"> Ukucula yenye indlela esimkhonza ngayo uYehova .
(trg)="22"> Ngoko asifuni kuphuma okanye singabikho xa kuculwa .
(trg)="23"> Zibuze : ‘ Ndicinga ntoni ngokucula ezintlanganisweni ?
(trg)="24"> Ndingenza ntoni ukuze ndiyeke ukoyika ukucula ndivakale ebandleni ?
(trg)="25"> Xa ndicula , ndinokubonisa njani ukuba ndiyayiva ingoma ? ’
(trg)="27"> Ayemakhulu kangakanani amalungiselelo enziwayo ukuze kuculwe ngamaSirayeli xa enqula ?
(trg)="28"> Abakhonzi bakaYehova kwakudala babesebenzisa umculo xa bemdumisa .
(trg)="29"> Okubangela umdla kukuba , kudala , xa amaSirayeli ayesenza ukuthanda kukaThixo ethembekile kuye , kwakubalulekile ukucula xa emnqula .
(trg)="30"> Ngokomzekelo , xa uKumkani uDavide wayelungiselela ukuba kunqulwe etempileni , wadibanisa abaLevi abayi - 4 000 ukuze bacule , badumise uYehova .
(trg)="31"> Abayi - 288 kubo ‘ babeqeqeshelwe ukuvuma iingoma kuYehova , bonke beziingcali . ’ — 1 Kron .
(trg)="33"> Xa kwakunikezelwa itempile , umculo nokucula kwakubaluleke kakhulu .
(trg)="34"> IBhayibhile ithi : “ Kwathi kamsinya nje bakuba abavutheli - maxilongo neemvumi bevakalise njengamntu mnye ngesandi esinye bedumisa bebulela uYehova , yaye bathi bakuphakamisa isandi ngamaxilongo nangamacangci nangezixhobo zengoma nangokudumisa uYehova . . . ubuqaqawuli bukaYehova bazalisa indlu kaThixo oyinyaniso . ”
(trg)="35"> Loo nto imele ukuba yaluqinisa ukholo lwamaSirayeli ! — 2 Kron .
(trg)="37"> Kwalungiselelwa ukuba kuculwe njani ngexesha uNehemiya awayeyirhuluneli ngalo eYerusalem ?
(trg)="38"> Xa uNehemiya wayekhokela amaSirayeli ukuba akhe iindonga zaseYerusalem , naye waqokelela abaLevi ukuze bacule benezixhobo zomculo .
(trg)="39"> Xa zagqitywayo ukwakhiwa iindonga zaza zanikezelwa , bacula kwaba mnandi apho .
(trg)="40"> Kwakukho “ iikwayari zokubulela ezinkulu ezimbini . ”
(trg)="41"> Enye yayingapha enye ingaphaya , zahamba zaza zadibana kudonga olwalukufutshane nendawo eyayinetempile .
(trg)="42"> Zazivakala nakude .
(trg)="43"> Asithandabuzi ukuba uYehova wavuya xa abakhonzi bakhe bamculela ngokuvakalayo bemdumisa .
(trg)="44"> UYesu wakubonisa njani ukubaluleka kokucula xa amaKristu enqula ?
(trg)="45"> Xa kwabakho ibandla lamaKristu lokuqala , umculo wabaluleka kunqulo lwenene .
(trg)="46"> Ngobona busuku bubalulekileyo embalini , emva kweSidlo SeNkosi Sangokuhlwa , uYesu nabafundi bakhe bacula . — Funda uMateyu 26 : 30 .
(trg)="47"> AmaKristu okuqala asibonisa njani ukuba kubalulekile ukucula ?
(trg)="48"> AmaKristu okuqala nawo asibonisa ukuba kubalulekile ukucula , sidumise uThixo .
(trg)="49"> Nangona ayedla ngokunqulela emizini yabazalwana , loo nto ayizange iwenze ayeke ukuzimisela xa eculela uYehova .
(trg)="50"> Umpostile uPawulos wabhalela amanye amaKristu wathi : “ Qhubekani nifundisana kwaye nilulekana ngeendumiso , ngemibongo kuThixo , ngeengoma zokomoya ninombulelo , nimvumela ezintliziyweni zenu uYehova . ”
(trg)="51"> Iingoma ezikwiculo lethu simele sizicule ‘ sinombulelo . ’
(trg)="52"> Nazo zezinye zezinto ‘ ikhoboka elithembekileyo neliyingqondi ’ ezisinika zona ukuze siqinise ukholo lwethu . — Mat .
(trg)="54"> ( a ) Yintoni enokwenza abanye abantu bazibambe xa becula ebandleni okanye endibanweni ?
(trg)="55"> ( b ) Sifanele simculele njani uYehova , ibe ngoobani esifanele sibone kubo ?
(trg)="56"> ( Jonga umfanekiso osekuqaleni . )
(trg)="57"> Unokwenza ntoni ukuba kwintsapho yakho okanye ekuhlaleni aniqhelanga kucula ?
(trg)="58"> Okanye mhlawumbi uqhele ukumamela abantu abawufundeleyo umculo kwiTV nakwireyido .
(trg)="59"> Kuba uthelekisa ilizwi lakho nelabo usenokuba neentloni okanye uzeye .
(trg)="60"> Kodwa loo nto ayimele ikuyekise ukuculela uYehova kuba umele umdumise .
(trg)="61"> Kunoko , libambele phezulu iculo lakho , uphakamise intloko , ucule uqinisekile uzimisele !
(trg)="62"> Sifanele sikhumbule ntoni xa sisoyika ukukhupha ilizwi xa sicula ?
(trg)="63"> Enye into eyenza abantu abaninzi balibambe ilizwi bangalikhuphi kukoyika .
(trg)="64"> Basenokuba abafuni kuphuma bodwa okanye bacinga ukuba amazwi abo mabi .
(trg)="65"> Kodwa ke , sifanele sikhumbule ukuba xa sithetha , ‘ sonke siyakhubekisana izihlandlo ezininzi . ’
(trg)="66"> Kodwa loo nto ayisenzi singathethi .
(trg)="67"> Ngoko kutheni siyeka ukuculela uYehova ngenxa yelizwi elingavakali kamnandi ?
(trg)="69"> Ngawaphi amacebiso esinokuwasebenzisa ukuze siphucule indlela esicula ngayo ?
(trg)="70"> Mhlawumbi siyoyika ukucula kuba singazi ukuba kuculwa njani .
(trg)="71"> Akhona amacebiso esinokuwasebenzisa ukuze siphucule indlela esicula ngayo .
(trg)="73"> Unokucula ngelizwi elivakalayo nelikhulu ngokufunda ukuphefumla kakuhle .
(trg)="74"> Njengokuba nesibane silayitwa ngamandla ombane , xa uthetha okanye ucula , ilizwi linikwa amandla ngumoya owuphefumlayo .
(trg)="75"> Ngoko xa ucula umele uvakale njengaxa uthetha okanye ngaphezu koko .
(trg)="76"> ( Jonga amacebiso akwincwadi ethi Zuza Kwimfundo YeSikolo Sobulungiseleli Sobuthixo , kwiphepha 181 ukuya ku - 184 , kumxholo othi “ Yilawule Ngendlela Efanelekileyo Indlela Ophefumla Ngayo . ” )
(trg)="77"> Ngamanye amaxesha neZibhalo zisixelela ukuba sikhwaze ngovuyo . — INdu .
(trg)="78"> 33 : 1 - 3 .
(trg)="79"> Cacisa ukuba sinokwenza ntoni ukuze sizithembe xa sicula .
(trg)="80"> Kunqulo lwentsapho okanye uwedwa , khawuzame le nto : Khetha enye yeengoma ozithandayo kwiculo .
(trg)="81"> Funda amazwi ayo ngokuvakalayo , ngelizwi elithe qabavu .
(trg)="82"> Ngelizwi elifanayo , funda umgca omnye uphefumle kwakanye .
(trg)="83"> Wucule ke loo mgca , ngelizwi elivakalayo .
(trg)="84"> Ilizwi lakho liza kuya lisiba namandla , ibe intle loo nto .
(trg)="85"> Malingakothusi okanye likwenze iintloni !